XOG: Ahlu suna oo ah Caqabadda ugu weyn ee dhismaha maamulka Galmudug | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Ahlu suna oo ah Caqabadda ugu weyn ee dhismaha maamulka Galmudug
Wali caqabad ayaa ka jirta dhismaha maamulka Galmudug,iyadoo dib u dhac u ku yimid soo xulista Baarlamaanka Labaad ee maamulkaas.
Ahlu suna ayaa la leeyahay waa caqabada ugu weyn ee ku horgudban geedi socodka hanaanka dhismo ee maamulka Galmudug,waxaana jira beelo kale oo dhaliilsan siday hadda wax u socdaan,balse saameyn ka weyn tan Ahlu suna malahan.
Wararka laga helayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in markale uu dib u dhac ku yimid soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug.
Qorshaha ayaa ahaa in 9-ka bishaan oo maanta ku beegan la shaaciyo liiska xubnaha cusub ee baarlamaanka maamulkaasi.
Lama oga sababta ka dambeysa arrintaan, balse waxaa weli jira is faham waa u dhexeeya dowladda federaalka iyo hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca.
Ilo xog ogaal u ah dhismaha maamulka Galmudug oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa inoo sheegay in deegaanadooda ay isaga laabteen ergadii saxda ahayd ee soo xuli lahayd Xildhibaanada,balse Odayaal ay wadato Madaxtooyada Soomaaliya ay ku hareen magaalada Dhuusamareeb,kuwaas oo xareyntooda muran uu ka taagan yahay.
Sida uu shaaciyey guddiga farsamada guddoonka baarlamaanka Galmudug ayaa waxaa la dooran doonaa 13-illaa 16-ka bishaan December, halka Madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa la dooran doono 17-la bishaan ee 2019-ka, balse waxa ay u muuqataa in uusan dhaqan geli karo jadwalkaasi marka la fiiriyo, sida ay hadda wax u socdaan.
Galmudug waxa ay tan aas aas-keedii wajaheysaa khilaafaad lugaha qabtay maamulkaasi, kaas oo cuuryaamiyey horumarka gobollada Galgaduud iyo Mudug.
Khilafaadkaas ayaa sidoo kale sababay in Galmudug ay noqoto maamul liita, marka loo eego maamullada kale ee ka jira dalka.